Winning Mask Slot I - Myanmar Online Game
ဒီ Winning Mask Slot ဟာဆိုရင်တော့ နိုင်ငံအနှံ့အပြား အထူးသဖြင့် တရုတ်မှာ အတော်လေးကို ရေပန်းစားလျက်ရှိတဲ့ စလော့ တစ်ခုပါ။
Winning Mask I က JDBYG ရဲ့ Slot အပိုင်းကို ကိုယ်စားပြုအနေနဲ့ ရှိနေပြီး JDBYG ရဲ့ Popular အဖြစ်ဆုံး Slot တစ်ခုဆိုရင်လဲမမှားပါဘူး
Grand Prize ကိုလဲ အများဆုံး 5500X အထိရနိုင်တာပါ!
ထပ်ပြီးပြောရရင် Free Session (Free Bonus Game) ကလဲ အများဆုံး 150 ကြိမ်အထိပါ။ အများဆုံး Mask Reel Bonus ကလဲ 200X အထိဆိုတော့ကာ ဘယ် Slot ဝါသနာရှင်ကများမဆော့ပဲ နေချင်ပါအုံးမလဲဗျာ။
Line ကလဲ 1024 ways အထိတောင်ရှိတာဗျ! အဲ့တော့ ဒီမျက်နှာဖုံး Slot အကြောင်းကို လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်။
ဒီကစားနည်းမှာတော့ Slot ထုံးစံအတိုင်း ဘယ်မှညာ ကြည့်ပြီးတော့ “Bonus” Symbol ကလွဲပြီး တခြား Symbol တွေအကုန် X1 Multiplier ပြပါတယ်။
“Bonus” symbol ကလဲ Reel 1,2နဲ့3တို့မှာပေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကစားနည်းမှာ သတိထားရမှာက Bonus Symbol ၂ခုရှိတာပါပဲ။
အခုပြောခဲ့တဲ့ “Bonus” Symbol ကတော့ Free Spin ရစေမှာဖြစ်ပြီးတော့ နောက်ထပ် “Mask Reel Bonus” ကတော့ Mask Bonus ကိုလှည့်ခွင့်ပေးစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ Reel 3,4 နဲ့5တို့မှာပေါ်ပါတယ်။
Wild ဆိုတာကတော့ဖဲမှာဆိုရင် Joker သဘောမျိုးပဲ လိုအပ်တဲ့နေရာမှာ အစားထိုးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လဲ အပေါ်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ Bonus Symbol နဲ့ Mask Reel Bonus Symbol တို့ကိုတော့ ချွင်းချက်အနေနဲ့ အစားမထိုးပေးပါဘူး။ ကျန်တဲ့ မျက်နှာဖုံး Symbol တွေနဲ့ အက္ခရာ Symbol တွေရဲ့ တန်ဖိုးတွေကို ပုံမှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Bonus Symbol က Reel 1,2နဲ့3တို့မှာကျမှာဖြစ်ပြီးတော့3ခုကျမယ်ဆိုရင် Free Spin 10 ခါလှည့်ခွင့်ရပါတယ်။ Free Spin Bonus လှည့်နေတုံးမှာ မျက်နှာဖုံးတွေက မျက်နှာဖုံးတစ်ခုထဲကို ပြောင်းလဲသွားပြီးရင် အနိုင်ရဖို့ပေါင်းစည်းမှုဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။
ပထမဆုံးမှာတော့ Spin ရပ်သွားတာနဲ့ Reel တွေအပေါ်ကအနိုင်တွေအားလုံးအတွက် တွက်ချက်ပြီးပေးပြီးပါပြီ။ ဒုတိယအနေနဲ့ Reel မှာပါလာတဲ့ မျက်နှာဖုံးတွေက အောက်ကပုံမှာပြထားတဲ့ မျက်နှာဖုံးတွေထဲကတစ်ခုကို ကျပန်းပြောင်းလဲသွားမှာပါ။
မျက်နှာဖုံးတစ်ခုချင်းစီရဲ့လျော်ဆကလည်းမတူပါဘူး ဒါကြောင့်လျော်ဆအများဆုံးဖြစ်တဲ့မျက်နှာဖုံးကိုပြောင်းလဲသွားဖို့ ဆုတောင်းပေတော့မိတ်ဆွေရေ
မျက်နှာဖုံးတွေကပုံစံတစ်ခုတည်းအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပြီးသွားပြီဆိုရင် ထိုပြောင်းလဲသွားတဲ့မျက်နှာဖုံးရဲ့လျော်ဆအတိုင်း အနိုင်တွေကိုလဲ ထပ်တွက်ချက်ပြီး Win meter ထဲပေါင်းထည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်!
Free Spin လှည့်နေတုန်းကို ထပ်ပြီး Bonus Symbol3ခုထပ်ကျလာမယ်ဆိုရင် Free Spin 10 ခုထပ်ပေါင်းသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ အများဆုံး Free Spin 150 အထိတောင်ရပါတယ်!
Free Spin Bonus ရပြီးသွားရင် မိတ်ဆွေရဲ့အကောင့်ထဲကအမှတ်တွေသုံးစရာမလိုဘဲ Free Spin အရေအတွက်ကုန်တဲ့အထိ Auto လှည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
လျော်ကြေး ကိုပြန်တွက်ချက်တဲ့နေရာမှတော့ Free Spin မရခင်မှာ ထည့်ထားတဲ့ လောင်းကြေးနဲ့ပဲ မြှောက်ပြီးတွက်ပါတယ်။
Mask Reel Bonus
Mask Reel Bonus ကတော့ Reel 3,4 နဲ့5တို့မှာကျတာဖြစ်ပြီးတော့3ခုသာကျမယ်ဆိုရင် Mask Reel Bonus ရသွားပါပြီ။ ရသွားပြီဆိုရင်တော့ အရှေ့ Reel 1 နဲ့2ကပေါင်းပြီးတော့ Multiplayer တွေပြထားတဲ့ မျက်နှာဖုံး Symbol တွေအနေနဲ့ပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Bonus Game အစမှာ တစ်ခါ Spin ပြီးတော့ ရပ်သွားတဲ့ အချိန်မှာရှိနေတဲ့ Multiplier ကိုယူသွားမှာပါ။
ပြီးရင်တော့ ကိုယ်ရတဲ့ Multiplier တန်ဖိုးကို လောင်းကြေးနဲ့မြှောက်ပြီးရင် စုစုပေါင်းအနိုင်ကိုပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Mask Reel Bonus မှာလဲ Bonus မစခင်မှာ ထည့်ထားတဲ့လောင်းကြေးနဲ့ပဲ တွက်ချက်ပါတယ်။
ဒီ Mask Reel Bonus Symbol ကတော့ Free Spin Bonus လှည့်နေတဲ့အချိန်မှာ မပါဝင်ပါဘူး။
Free Spin Bonus မှာပြောင်းသွားတဲ့ မျက်နှာဖုံးတွေကတော့ အောက်ကပုံအတိုင်း တန်ဖိုးရှိပါတယ်
ကဲ.. ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ ဘာလို့ Slot ဝါသနာရှင်တွေက ဒီကစားနည်းကိုစိတ်ဝင်စားကြလဲဆိုတာသိလောက် ပြီထင်ပါတယ်။
1024 ways ထဲမှာမှ 5500X Grand Prize ကြီးရယ် 150 အထိရနိုင်တဲ့ Free Spin Bonus ရယ် 200X အထိရနိုင်တဲ့ Mask Reel Bonus တို့ကစောင့်ကြိုနေတာဖြစ်လို့ အခုပဲ JDBYG ရဲ့ Slot စာရင်းမှာ အနိုင်မျက်နှာဖုံး Winning Mask I ကိုသွားပြေးပြီး ခံစားလိုက်ပါတော့နော်!